बजेटमाथि ६१ बुँदामा सुझाव – Durbin Nepal News
दूरबिन नेपाल २६ बैशाख २०७६, बिहीबार १३:३३
काठमाडौँ, २६ वैशाख : आगामी वर्षको बजेटले केलाई प्राथमिकता दिनुपर्ला ? दिगोपन, सुशासन, पूर्वाधार कुन क्षेत्रमा बढी लगानी गर्नुपर्ला ? कृषि, सेवा, उद्योग पूर्वाधार विकासतर्फ कुन क्षेत्रमा बढी लगानी गर्नुपर्ला ? यातायात, सञ्चार र ऊर्जा क्षेत्रमा कस्ता रणनीति बनाउनुपर्ला ? आर्थिक गतिविधिसम्बन्धीका यस्तै–यस्तै ६१ बुँदामा सांसद, अर्थविज्ञ, उद्योगी, व्यवसायी र पत्रकारले फरक अनुभूति हुने गरी बजेटका विषयमा लिखित सुझाव पेश गरे ।
प्रि–बजेट छलफलमा निर्माण व्यवसायी महासङ्घका कार्यबाहक अध्यक्ष निकोलस पाण्डे, बैंकर्स एशोसिएशनका किरणकुमार श्रेष्ठ, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्का अध्यक्ष केशव बडाल, नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट संस्थाका अध्यक्ष जगन्नाथ उपाध्यायलगायत उद्योगी व्यवसायीले स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धनमा जोड दिनुपर्ने र सहुलियत कर्जासहितका प्रोत्साहनका कार्यक्रम र स्थानीय धरातलीय सम्भावना र आवश्यकताको आधारमा विकास आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै लिखित र मौखिक सुझाव दिनुभएको थियो ।
२६ बैशाख २०७६, बिहीबार १३:३३ मा प्रकाशित